Orylọ ọrụ na-ere ọkụ na-ere Shangri-La Sheer Blinds Fabric 100% Polyester
Ndụ na-enwe ihe ịga nke ọma ma na-eme mkpọtụ, ọ dịkwa gị mkpa inwe ụdị udo na udo dị otú ahụ. Ndị ìsì mara mma jiri nwayọ kewapụ ụwa dị n'èzí, na-ahapụ ohere pụrụ iche maka obi. Ọnọdụ, ọnọdụ okpomọkụ, na ọkụ nke ebe obibi ahụ ga-agbanwe n'ụzọ kwekọrọ na ya, ndụ kwesịkwara ịbụ nke aka ike. Usoro na imewe nke ákwà ngebichi na-ebelata bara ọgaranya ma dị iche iche. Shangri-La sheer blind bụ ụdị kpochapụwo. Groupeve Shangri-La sheer blinds ákwà dị nro dị ka silk, mara mma dị ka yarn.
Abledị ejiji ọhụụ ejiji atọ nke atọ Shangri-La Fabric ọkara ọkara
Shangri-La blinds (makwaara kpuru ìsì) bụ ụdị ihe mkpuchi na-achịkwa ọkụ, nke nwere ụzọ mpempe akwụkwọ nwere ọtụtụ plọg. Mgbe a na-emechi ìsì ahụ, eriri ahụ na-adabere na ụzọ mpempe akwụkwọ ahụ, ma mgbe emepere ya, eriri ahụ na-agbatị n'otu ebe dị n'akụkụ ibe akwụkwọ ahụ. N'ime ha, mpempe akwụkwọ na ntupu na-ejikọta site na akwa ma ọ bụ usoro ndị ọzọ. Mgbe niile na-emeghe, na abụọ n'ígwé nke tulle bụ perpendicular na ẹbiet ọ bụla ọzọ. N'oge a, ọkụ ga-ebelata mgbe ị na-agafe n'ogologo otu akụkụ nke yarn ahụ. Nọgide na-edozi elu nke ákwà ngebichi, ndị kpuru ìsì ga-agbagharị na elu axis.
Ọ na ọtụtụ-eji n'ụlọ, hotels, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, Villas, elu-ọgwụgwụ ụlọ ọrụ ụlọ na ebe ndị ọzọ. Maka ákwà mkpuchi Shangri-La, obosara anyị na-eme bụ 3m, na ihe a bụ 100% polyester.
Ihe ndozi ụlọ Shangri-La Blind Fabric Semi-Blackout
Shangri-La blind bụ ụdị ọhụụ ọhụụ na-ejikọ ákwà mgbochi eletrik, windo windo, ihe mkpuchi venetian na ihe mkpuchi mkpuchi. Shangri-La blind bụ nhọrọ kachasị mma maka idobe nzuzo na ịchịkwa ọkụ. A na-ejikarị ya eme ihe na obodo, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ nri, ụlọ oriri na nkwari akụ na ebe ndị ọzọ. Shangri-La blinds blinds nwere ihe owuwu okpukpu atọ, nke a na-eji akwa abụọ na-ebunye ọkụ na-ebunye ákwà jikọtara ya na ọtụtụ akwa nke ihe mkpuchi ọkụ na nha anya.
Groupeve shangri-La blinds fabric bụ ihe pụrụ iche na ederede na ọmarịcha ọdịdị nke ejiri 100% polyester mee. Ijikọ akwa dị n'agbata ọkwa abụọ nke akwa sheer nwere ike ime ka ime ụlọ ahụ dị nro. Tụgharịa agụba iji dozie ike ọkụ. Texturedị pụrụ iche shangri-La na-ekpuchi ákwà nwere ike ime ka agba dịgide ogologo oge. Ike shading. Enwere ike iji nhicha nke Ultrasonic mee ka akwa ndị ahụ dị ka ọhụụ.
Modern Design Roller Blinds Shangri-la Zebra Fabric N'ihi Home
Shangri-La zebra blinds bụ ọhụụ ohuru na-ejikọ ákwà mgbochi eletrik, windo windo, ihe mkpuchi venetian na ihe mkpuchi ihu. Shangri-La blind bụ nhọrọ kachasị mma maka idobe nzuzo na ịchịkwa ọkụ. Ọ na ọtụtụ-eji n'ụlọ, hotels, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, Villas, elu-ọgwụgwụ ụlọ ọrụ ụlọ na ebe ndị ọzọ.
Groupeve Shangri-La blinds fabric agaghị enwe nsogbu nke gluing, yellowing na deformation. A na-esite na mba ọzọ atụbata yarn ahụ na ekwekọ. A kpara ha n'otu oge n'oge usoro mmepụta ma na-arụ ọrụ na-esote dịka oke okpomọkụ na ọnọdụ nrụgide dị elu iji nweta akwa dị elu dị elu. Ihe anyị na-eweta abụghị naanị akwa, kamakwa ọ bụ omume maka ndụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ bụla mpịakọta nke shangri-la zebra ákwà na-anwale tupu Mbupu.
Ogo nkwa Shangri-La Sheer Blinds Fabric For Office
Shangri-La sheer blinds (makwaara kpuru ìsì) bụ ụdị ihe na-achịkwa ọkụ, nke nwere ụzọ mpempe akwụkwọ nwere ọtụtụ plọg. Agba nke Groupeve Shangri-La na-ekpuchi ákwà dị ọcha ma jupụta. Mgbe ị na-ahọrọ Shangri-La na-ekpuchi ákwà, ihe mbụ na-adọrọ ndị mmadụ n'anya bụ ụcha dị ọcha ha na-enwu gbaa, bụ nke sitere na yarn na looms dị na ya.
Mgbe ị na-ahọrọ akwa, ndị na-eri ihe aghaghị ị attentiona ntị na njirimara niile nke Shangri-La sheer blinds fabric, naanị mgbe ahụ ka ị nwere ike ịhọrọ akwa mkpuchi mkpuchi Shangri-La nke na-enye afọ ojuju, dị mma, ma nwee ntụkwasị obi. N'agbanyeghị ụdị nke ịchọrọ, a na-enweta ihe nlele n'efu maka gị ịlele ogo ma họrọ agba.
Factory Hot Reell Triple Shade Shangri-La Roller Blinds Fabric 100% Blackout
Shangri-La roller blinds integrate windo windo, blinds velins na roller blinds, nke bụ ejiji na nkenke, ọkụ nwere ike gbanwee kpamkpam, nke nwere ike ndo mana ọ gaghị ekpuchi ebe ahụ. Ọ na ọtụtụ-eji n'ụlọ, hotels, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, Villas, elu-ọgwụgwụ ụlọ ọrụ ụlọ na ebe ndị ọzọ.
Groupeve shangri-La roller blinds akwa na-emeso ya na mmiri na-enweghị mmiri, mildew-proof na mgbochi static ọgwụgwọ-mgbe nhazi pụrụ iche, ọ naghị adị mfe ịkpụzi na ntụ, ọ dịkwa mfe ihicha ma debe. Tụkwasị na nke ahụ, usoro nkwụsịtụ na nke ojii nke Shangri-La na-ekpuchi ákwà mkpuchi nwere ike ịgbasa ọkụ a na-ahụ anya n'ime ụlọ, na-ebelata ojiji nke ike ọkụ.
Mfe ma Mara Shangri-La Fabric 3m Obosara
Shangri-La blinds integrate windo windo, blinds blinds and roller blinds, nke bụ ejiji na nkenke, ọkụ nwere ike gbanwee kpamkpam, nke nwere ike ndo mana ọ gaghị ekpuchi ebe ahụ. Groupeve Shangri-La akwa na-emeso ya na mmiri na-enweghị mmiri, ihe ngosi ebumpụta ụwa na ọgwụgwọ mgbochi-mgbe emechara nhazi pụrụ iche, ọ naghị adị mfe ịkpụzi na uzuzu, ọ dịkwa mfe ihicha ma debe ya; Ke adianade do, ọkara-blackout na blackout usoro nke Shangri-La blinds agbasa anya ìhè n'ime, na-ebelata ojiji nke ọkụ ọkụ. Ha abụọ nwere ike igbochi ihe karịrị 95% nke ụzarị ultraviolet na-emerụ ahụ ma chebe arịa ụlọ.
Ihe Nleba Anya Atọ nke Shangri-La na-akpata atọ maka indlọ oriri na ọrantsụ .ụ
Groupeve shangri-La roller blinds akwa bụ nke 100% polyester, obosara bụ 3m ma mesoo ya na mmiri na-enweghị mmiri, ihe mgbochi na ọgwụ mgbochi-mgbe nhazi pụrụ iche, ọ naghị adị mfe ịkpụzi na uzuzu, ọ dịkwa mfe ihicha. ma jigide; shangri-La ala blinds akwa nwekwara ike n'ụzọ dị irè belata anyanwụ radieshon na-abanye n'ime ụlọ, si otú mbenata ike oriri nke ikuku conditioners na ngwaọrụ ndị ọzọ.